Teny tsara indrindra avy any Chinua Achebe - Victor Mochere
Chinua Achebe dia mpanoratra tantara, poeta ary mpitsikera Nizeriana izay heverina ho olo-malaza indrindra amin'ny literatiora Afrikana maoderina. Ny bokiny voalohany sy magnum opus, Things Fall Apart (1958), dia mitana toerana lehibe amin'ny literatiora afrikana ary mijanona ho ny tantara afrikana be mpitia indrindra, nadika ary namaky. Miaraka amin'ny Things Fall Apart, ny No Longer at Ease (1960) sy ny Arrow of God (1964) dia mamita ilay antsoina hoe "African Trilogy"; Ny tantara taty aoriana dia misy ny Lehilahy iray an'ny vahoaka (1966) sy Anthills of the Savannah (1987). Matetika izy no antsoina hoe "rain'ny literatiora afrikana", na dia nolaviny mafy aza ny toetra.
Nodinihina lalina ny asan'i Achebe ary nipoitra ny sanganasa ara-tsiansa midadasika miresaka momba izany. Ho fanampin'ireo tantara noforoniny, ny oeuvre an'i Achebe dia ahitana tantara fohy, tononkalo, andrana ary boky ho an'ny ankizy. Miankina betsaka amin'ny fomban-drazana am-bava Igbo ny fomba fanaony, ary manambatra fitantarana mahitsy miaraka amin'ny fanehoana tantaram-bahoaka, ohabolana ary kabary. Anisan'ny lohahevitra maro sahanin'ny sanganasany ny kolontsaina sy ny fanjanahantany, ny maha lahy sy ny vavy, ny politika ary ny tantara.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Chinua Achebe dia voatanisa etsy ambany.
“Tsy afaka mandoa ny rononon-dreniny ny zaza.” – Chinua Achebe
"Ny demokrasia miasa sy matanjaka dia mitaky fanaraha-maso ara-pahasalamana, fandraisana anjara ary fitarihana ara-moraly." – Chinua Achebe
"Ny olona manakorontana ny hafa dia manakorontana ny tenany koa." – Chinua Achebe
"Ny olona manaja ny lehibe dia manokatra lalana ho amin'ny fahalehibiazany." – Chinua Achebe
"Ny saobakaka tsy mihazakazaka foana amin'ny antoandro." – Chinua Achebe
"Ny Amerikana, amiko, dia mirona hiaro ny zanany amin'ny hamafin'ny fiainana, ho an'ny tombontsoany." – Chinua Achebe
"Ny mpanakanto iray, raha ny fahatakarako ny teny, dia tokony hiandany amin'ny vahoaka hanohitra ny Emperora izay mampahory ny vahoakany." – Chinua Achebe
“Sahirana foana ny vehivavy antitra raha taolana maina no resahina amin’ny ohabolana”. – Chinua Achebe
“Ny zava-kanto dia ezaka tsy tapaka ataon’ny olona mba hamoronana filaminan’ny zava-misy hafa amin’izay nomena azy ho azy”. – Chinua Achebe
"Araka ny voalazan'ny razantsika, ny katsaka efa masaka dia fantatra amin'ny tarehiny." – Chinua Achebe
"Ny fiantrana dia opium ho an'ny manana tombontsoa." – Chinua Achebe
"Ny demokrasia dia tsy zavatra arianao mandritra ny folo taona, ary amin'ny taona faha-11 dia mifoha ianao ary manomboka mampihatra indray. Tsy maintsy manomboka mianatra mifehy ny tenantsika indray isika.” – Chinua Achebe
"Ny taranaka tsirairay dia tsy maintsy manaiky sy manaiky ny asa izay noforonin'ny tantara sy ny fitondran-tena manokana." – Chinua Achebe
“Tsy miraharaha firy ny taona aho. Mieritreritra an’ireo antitra fantatro fony aho nihalehibe, ary toa lehibe noho ny fiainana foana izy ireo.” – Chinua Achebe
“Lazaiko amin'ny mpianatro fa tsy sarotra ny mamantatra olona toa anao, olona mifanakaiky mitovy aminao. Ny sarotra kokoa dia ny mamantatra olona tsy hitanao, izay lavitra be, izay hafa loko, izay mihinana sakafo hafa. Rehefa manomboka manao izany ianao dia tena manao ny zava-mahatalanjona ny literatiora.” – Chinua Achebe
“Heveriko fa ny mpanakanto iray, raha ny famaritako an’io teny io, dia tsy ho olona miandany amin’ny emperora hanohitra ny olom-peheziny tsy manan-kery. Tsy mitovy amin’ny fanoritsoritana ny fomba tokony hanoratra ny mpanoratra izany.” – Chinua Achebe
“Miverina any an-tsain’ireo antitra fantatro fony aho nihalehibe, ary toa lehibe noho ny fiainana foana izy ireo.” – Chinua Achebe
“Mpanohana ny faniriana aho, tao amin'ny faritra misy ahy any Nizeria, hiala tao amin'ny federasiona satria notsaboina mafy tamin'ny zavatra antsoina hoe fandripahana foko tamin'izany andro izany.” – Chinua Achebe
“Mpanoratra efa za-draharaha aho izao. Saingy rehefa nanomboka aho dia tsy fantatro hoe inona no hitranga. Fantatro fotsiny fa nisy zavatra tao anatiko naniry ny hilazako hoe iza aho, ary mety hivoaka izany na dia tsy tiako aza izany. – Chinua Achebe
“Nisy olana imbetsaka aho teto Nizeria, satria niresaka momba ny fampijaliana ny antokon’olona eto amin’ny firenena noho ny tsy fitovian’ny fivavahana. Ireo no zavatra tokony hapetratsika any aoriana.” – Chinua Achebe
"Raha tsy tianao ny tantaran'ny olona iray dia manorata ny anao manokana." – Chinua Achebe
“Raha ny marina, dia noheveriko fa tena tsara sy tena sarobidy ho anay ny Kristianisma. Rehefa afaka kelikely anefa, dia nanomboka nahatsapa aho fa angamba tsy feno tanteraka ilay tantara nolazaina tamiko momba an’io fivavahana io, fa nisy zavatra navela.” – Chinua Achebe
“Ny tantara no tompony sy mitarika antsika. Izany no mampiavaka antsika amin’ny omby; ny marika eo amin’ny tarehy no mampiavaka ny olona iray amin’ny namany. – Chinua Achebe
“Ny mpitantara no mahatonga antsika ho toy ny tenantsika, izay mamorona tantara. Ny mpitantara dia mamorona fahatsiarovana izay tsy maintsy ananan'ireo tafavoaka velona - raha tsy izany dia tsy hisy dikany ny fahavelomany. " – Chinua Achebe
“Betsaka ny mpanoratra tsy afaka mivelona. Noho izany, ny fahaizana mampianatra ny fanoratana dia sarobidy ho azy ireo. Saingy tsy dia fantatro loatra ny lanjan'izany amin'ny mpianatra. Tsy midika akory izany hoe tsy misy ilana azy. Saingy tsy te hampianatra ahy hanoratra aho.” – Chinua Achebe
“Nivadika ho Kristianina tany amin’ny faritra nisy ahy tany Nizeria ny ray aman-dreniko. Tsy niova fo fotsiny izy ireo; ny raiko dia evanjelistra, mpampianatra fivavahana. Nanao dia nandritra ny dimy amby telopolo taona izy sy ny reniko nankany amin’ny faritra samihafa teto Igboland, ka nampiely ny filazantsara.” – Chinua Achebe
"Ny toerana misy ahy dia ny zava-kanto matotra sy tsara dia efa nisy foana mba hanampiana, hanompoana ny maha-olombelona. Tsy ho voampanga. Tsy hitako izay iantsoana ny zavakanto raha ny hanakorontana ny maha-olombelona no tanjony”. – Chinua Achebe
“Ny fiadiako dia literatiora.” – Chinua Achebe
"Nizeria no izy satria tsy araka ny tokony ho izy ny mpitarika azy." – Chinua Achebe
“Tsy misy afaka mampianatra ahy hoe iza aho. Azonao atao ny mamaritra ny ampahany amiko, fa ny maha-izaho ahy - sy izay ilaiko - dia zavatra tsy maintsy hotadiaviko. " – Chinua Achebe
“Oh, ny zava-dehibe indrindra momba ny tenako dia ny fiainako feno fiovana. Noho izany, rehefa mandinika an’izao tontolo izao aho, dia tsy manantena hahita izany toy ny nahitako ilay olona mipetraka ao amin’ny efitrano manaraka.” – Chinua Achebe
“Rehefa mandeha ny tantara iray ary fantatro fa azo atao izany, dia tsy manahy momba ny tantara na lohahevitra aho. Saika ho tonga ho azy ireo zavatra ireo satria misintona ny tantara izao ireo mpilalao.” – Chinua Achebe
“Rehefa mamela ny tenanao hifantoka amin'ireo olona ao amin'ny tantara iray ianao, dia mety hanomboka hahita ny tenanao ao amin'io tantara io ianao na dia lavitra aza ny toe-javatra misy anao. Izao no ezahiko ambara amin’ny mpianatra: zavatra lehibe iray azon’ny literatiora atao izany – afaka mampahafantatra antsika amin’ny toe-javatra sy ny olona lavitra izany.” – Chinua Achebe
"Ny iray amin'ireo fitsapana tena marina momba ny tsy fivadihana dia ny fandàvany tsy ho levona." – Chinua Achebe
“Mamorona tantara ny olona; na ny marina kokoa ny tantara dia mamorona olona mamorona tantara. " – Chinua Achebe
"Ny olona avy amin'ny faritra samihafa amin'izao tontolo izao dia afaka mamaly tantara iray ihany raha milaza zavatra aminy momba ny tantarany manokana sy ny traikefany manokana izany." – Chinua Achebe
"Milaza ny olona fa raha mahita rano miakatra hatramin'ny kitrokelinao ianao dia izao no fotoana hanaovana zavatra momba izany, fa tsy rehefa eo amin'ny tendanao." – Chinua Achebe
"Tsy miala sasatra ny filoha raha tsy milaza amin'ny firenena." – Chinua Achebe
“Ny tombontsoa, ​​hitanareo, dia iray amin’ireo fahavalon’ny saina; mampiely tavy matavy matevina eo ambonin’ny fahatsapantsika izy io.” – Chinua Achebe
"Ny fanemorana dia fialan-tsiny ataon'ny kamo." – Chinua Achebe
"Ny ohabolana dia menaka palmie izay ihinanana ny teny." – Chinua Achebe
"Ny tantara dia mikendry ny hanamafisana izay tombony azon'ny olona na ny mpitarika azy na eritreretiny fa nataony tamin'ny diany nanerana an'izao tontolo izao." – Chinua Achebe
"Ny hoe voahodidin'ny mistery lalina isika dia fantatry ny rehetra afa-tsy ny tsy mahalala izay tsy azo sitranina." – Chinua Achebe
"Ny rivotra, izay nohenjanina noho ny fientanentanana, dia nitsahatra indray." – Chinua Achebe
"Ny fahasimbana vita ao anatin'ny herintaona dia mety haharitra folo na roapolo taona indraindray vao amboarina." – Chinua Achebe
"Ny lalitra izay tsy misy manoro azy dia manaraka ny faty any am-pasana." – Chinua Achebe
“Hoy ilay idealista tsy manam-paharetana hoe: 'Omeo toerana hijoroako aho, dia hanosika ny tany aho.' Saingy tsy misy toerana toy izany. Isika rehetra dia tsy maintsy mijoro amin'ny tany ary mandeha miaraka aminy amin'ny hafainganam-pandehany. " – Chinua Achebe
“Ireo efatra na dimanjato taona farany nifandraisana tamin’i Afrika tamin’ny Eoropeanina dia namokatra fitambarana literatiora iray izay mampiseho an’i Afrika amin’ny fomba tena ratsy sy ny Afrikana amin’ny fomba mahamenatra. Ny anton'izany dia mifandraika amin'ny filana hanamarinana ny varotra andevo sy ny fanandevozana. – Chinua Achebe
“Ny zava-dehibe indrindra momba ny tenako dia ny fiainako feno fiovana. Noho izany, rehefa mandinika an’izao tontolo izao aho, dia tsy manantena hahita izany toy ny nahitako ilay olona mipetraka ao amin’ny efitrano manaraka.” – Chinua Achebe
"Ny hany zavatra nianarantsika avy amin'ny traikefa dia ny tsy ianarantsika na inona na inona avy amin'ny traikefa." – Chinua Achebe
“Ny olana amin'ny fikomiana tsy misy mpitarika dia ny hoe tsy fantatrao foana izay azonao any amin'ny farany. Raha tsy mitandrina ianao dia afaka manolo ny governemanta ratsy amin'ny governemanta ratsy kokoa! – Chinua Achebe
“Tena tsara ny fifandraisana amin'ny vahoakako, ny vahoaka Nizeriana. Sahirana hatrany ny fifandraisako amin’ny mpitondra”. – Chinua Achebe
"Ny masoandro hamirapiratra amin'izay mitsangana, alohan'ny hazavany amin'izay mandohalika eo ambaniny." – Chinua Achebe
"Ny hevitra rehetra momba ny stereotype dia ny fanatsorana. Raha tokony handalo ny olan'ireo fahasamihafàna lehibe rehetra ireo – hoe izao na angamba izao – manana fanambarana lehibe iray fotsiny ianao; ity.” – Chinua Achebe
"Tsy manam-pahataperana izao tontolo izao, ary izay tsara amin'ny olona iray dia fahavetavetana eo amin'ny sasany." – Chinua Achebe
“Toy ny mandihy saron-tava izao tontolo izao. Raha te hahita azy tsara ianao, dia tsy mijoro amin’ny toerana iray.” – Chinua Achebe
"Misy adidy ara-moraly, araka ny hevitro, ny tsy hikambana amin'ny hery hanoherana ny tsy manan-kery." – Chinua Achebe
"Tsy misy tantara tsy marina." – Chinua Achebe
“Tsy misy tsy fahampian'ny mpanoratra manoratra tantara any Amerika, momba an'i Amerika. Noho izany, toa ho very maina ho ahy ny manampy ireo olona marobe manoratra eto rehefa vitsy ny olona manoratra momba ny any an-kafa. " – Chinua Achebe
“Tsy nifidy ny mpitondra tsara indrindra foana izy ireo, indrindra taorian'ny fotoana naharitra tsy nampiasany an'io toerana fanaovana fifidianana malalaka io. Matetika ianao no very ilay fahazarana.” – Chinua Achebe
“Tsy tokony hanadino ny hanetry tena ireo voan’ny fanahy feno hatsaram-panahy.” – Chinua Achebe
“Amiko, ny maha intellectuel dia tsy midika hoe mahafantatra ny olana ara-tsaina; midika hoe faly amin’izy ireo izany.” – Chinua Achebe
"Mandra-pahatongan'ny liona manana ny tantarany manokana, ny tantaran'ny fihazana dia hanome voninahitra ny mpihaza foana." – Chinua Achebe
"Ny tokony hataon'ny firenena iray dia ny rariny amin'ny olom-pireneny rehetra - na tsy mitovy foko na lahy na vavy ny olona." – Chinua Achebe
"Rehefa mahita lehilahy azony resena ny kanosa, dia ho noana hiady izy." – Chinua Achebe
"Raha misy olona mihavana amin'ny andriamaniny sy ny razany, dia ho tsara na ratsy ny vokatra azony, araka ny herin'ny sandriny." – Chinua Achebe
“Rehefa manangona hery ampy ny fomban-drazana iray mba hitohy mandritra ny taonjato maro, dia tsy hovonoinao fotsiny izany indray andro any.” – Chinua Achebe
“Rehefa nanomboka nianatra sy nianatra namaky teny aho, dia nifanena tamin’ny tantaran’olona sy tany an-tany hafa.” – Chinua Achebe
"Rehefa mitsako ahitra ny zanany dia mijery ny vavany." – Chinua Achebe
“Rehefa miteny ny antitra dia tsy noho ny hamamin’ny teny ao am-bavantsika; izany dia satria mahita zavatra tsy hitanareo izahay. – Chinua Achebe
“Rehefa mandondona eo am-baravaranao ny fahoriana ka milaza ianao fa tsy misy seza ho azy, dia rarany tsy hanahy ianao, fa ny fipetrahany ihany no nentiny”. – Chinua Achebe
“Rehefa tonga tao amin’ny tany Ibo, ohatra, ny Anglisy, tamin’ny fiandohan’ny taonjato faha-20, ka nandresy ny lehilahy tamin’ny ady nifanandrina tamin’ny toerana samy hafa, ary nanangana ny fitantanan-draharahany, dia nitolo-batana ireo lehilahy ireo. Ary ny vehivavy no nitarika ny fikomiana voalohany. – Chinua Achebe
"Rehefa mamiratra ny volana dia lasa noana mandeha an-tongotra ny kilemaina." – Chinua Achebe
"Rehefa manao ny asa soa isika dia aoka tsy hohadinointsika fa ny tena vahaolana dia ao anatin'ny tontolo iray izay tsy ilàna ny fiantrana." – Chinua Achebe
“Tahaka ny kitapo hoditr’osy ny fahendrena; samy mitondra ny azy avy.” – Chinua Achebe
"Ny vehivavy sy ny mozika dia tsy tokony hampiaraka." – Chinua Achebe
“Tsy manome prescription ny mpanoratra. Marary andoha izy ireo. – Chinua Achebe